Fitaovana rafitra biosafety indroa China ho an'ny mpamokatra sy mpamatsy fitsapana haingana antitra SARS-CoV-2 | Liming Bio
TheStrongStep® SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test dia famandrihana immunochromatographic haingana ho an'ny fitiliana ny antigene COVID-19 mankany amin'ny virus SARS-CoV-2 amin'ny vatan'ny Throat / Nasopharyngeal. Ny fitsapana dia ampiasaina ho fanampiana amin'ny famaritana ny COVID-19.
Ho an'ny laboratoara klinika na ny mpiasan'ny fahasalamana ihany
Ho an'ny fampiasana matihanina amin'ny fitsaboana ihany
Ho an'ny fitsapana Midstream
Ento amin'ny hafanan'ny efitrano ireto singa kitapo ireto alohan'ny fitsapana. Sokafy ny paosy ary esory ny fitaovana fitsapana.
Vantany vao nosokafana dia tsy maintsy ampiasaina avy hatrany ny fitaovana fitsapana.
Soraty amin'ny famantarana ny marary ilay fitaovana fanandramana.
Esory ny fonon'ny fitaovana.
1. Atsofohy ao anaty fantsona ny fehin-kibo, vakio ny fehin-kibo miaraka amin'ny breakpoint, avelao ny swab santionany latsaka ao anaty fantsona ary ario ny tapa-kazo ambony.
2. Kitiho ny fonon'ny fitaovana.
3. Vaky ilay tapa-kazo manga.
4. Fery fatratra ny fantsona manga, alao antoka fa latsaka ao amin'ilay fantsona ambany ny ranoka rehetra.
5. Vortex mafy ilay fitaovana.
6. Atsimbadika ilay fitaovana, avelao ny buffer santionany hifindra monina eo amin'ilay tadin'ny fitsapana.
7. Ataovy ao anaty toeram-piasana ilay fitaovana.
8. Amin'ny faran'ny 15 minitra vakio ny valiny. Ny santionany tsara dia tsara dia mety haneho valiny teo aloha.
Fanamarihana: ny valiny aorian'ny 15 minitra dia mety tsy marina.
1. Ny atin'ny kitapo ity dia ampiasaina amin'ny famaritana kalitao antigens SARS-CoV-2 avy amin'ny swab tenda sy swab nasopharyngeal.
2. Ity fitsapana ity dia mamantatra ny SARS-CoV-2 azo iainana (velona) sy tsy azo iainana. Ny fahombiazan'ny fitsapana dia miankina amin'ny habetsaky ny virus (antigen) ao amin'ilay santionany ary mety mifandraika na mety tsy hifandraisany amin'ny valin'ny kolontsaina viraliny natao tamin'io ohatra io ihany.
3. Ny valin'ny fitsapana ratsy dia mety hitranga raha ny haavon'ny antigen ao anaty santionany dia eo ambanin'ny fetran'ny fitsapana ny fitsapana na raha nangonina na nafindra tsy nety ilay santionany.
4. Ny tsy fanarahana ny fomba fanandramana dia mety hisy fiatraikany ratsy amin'ny zava-bitan'ny fitsapana ary / na tsy hanadino ny valin'ny fitsapana.
5. Ny valin'ny fitsapana dia tsy maintsy dinihina miaraka amin'ireo angona klinika hafa omen'ny mpitsabo.
6. Ny valim-panadinana tsara dia tsy manilika ny aretina miaraka amin'ny mikraoba hafa.
7. Ny valin'ny fitsapana ratsy dia tsy natao hifehezana ireo aretina hafa azo avy amin'ny virus na bakteria tsy SARS.
8. Ny valiny ratsy dia tokony ho raisina ho sahy ary hamafisina amin'ny fitsapana molekiola nahazo alalana avy amin'ny FDA, raha ilaina, ho an'ny fitantanana klinika, ao anatin'izany ny fifehezana ny aretina.
9. Ny tolo-kevitra momba ny fahamarinan-toerana dia miankina amin'ny angon-drakitra azo antoka avy amin'ny fitsapana ny gripa ary ny fahombiazany dia mety tsy hitovy amin'ny SARS-CoV-2. Ny mpampiasa dia tokony hizaha toetra haingana araka izay azo atao aorian'ny fanangonana santionany.
10. Ny fahatsapana ny andrana RT-PCR amin'ny famaritana ny COVID-19 dia 50% -80% fotsiny noho ny kalitaon'ny santionany na ny fotoana ateraky ny aretina amin'ny dingana famerenana amin'ny laoniny, sns. ambany noho ny Metodolojia.
Previous: Fitsapana haingana an'ny antigen an'ny SARS-CoV-2
Manaraka: Fitaovana rafitra ho an'ny fitsapana haingana Combo Antigen Rapotra SARS-CoV-2 & Influenza A / B
Fitsapana haingana momba ny Coronavirus Ket, Vibrio Cholerae O1 / O139 Antigen Combo Fitsapana haingana, H. Pylori Ag Rapid Test dia mamantatra ny antigen, Kitapo fitsapana Igm / Iggrapid, Coronavirus ho an'ny fitsapana Covid-19, Kitapo fitsapana antigona Coronavirus,